Apple nifidy Wistron any India ho mpamatsy ho an'ny iPhone 8 | Vaovao IPhone
Apple dia misafidy Wistron monina any India ho mpamatsy ho an'ny iPhone 8
Apple dia nifidy mpanamboatra Wistron ho mpamatsy lehibe voalohany an'ny iPhone 8 any India ho an'ity taona ity, taorian'ny tatitra maro fa nitady mpamatsy ny orinasa hamokatra ny vokariny eo an-toerana. Araka ny tatitry ny DigiTimes vaovao dia ho lasa mpanamboatra fitaovana voalohany ho an'ny iPhone i Wistron amin'ity 2017 ity, raha i Foxconn sy ny fanangonana mpivarotra hafa kosa kendrena ho "backup" tahaka ny OEM. Raha toa ka mitombo ny fangatahana.
Tamin'ny tatitra nataon'ny The Times of India tamin'ny volana lasa teo, nilaza izy fa Apple dia mitady ny hanangana orinasa mpamokatra iPhone any Bangalore, India ary Wistron ho mpiara-miasa. Ity zavamaniry ity dia inoana fa misy ny famokarana ary miasa amin'ny volana aprily ary ho mpandray anjara lehibe amin'ny rojom-panomezana iPhone any India amin'ny faran'ny 2017.
Ao amin'ny tatitra DigiTimes amin'izao fotoana izao, voalaza manokana izany Wistron dia nanitatra ny fahaizan'ny famokarana smartphone any India sy Sina.
Apple dia voalaza fa nifidy an'i Wistron ho OEM voalohany (mpanamboatra fitaovana voalohany) any India ho an'ireo iPhones vaovao navoaka tamin'ny 2017, raha Foxconn Electronics sy mpanamboatra hafa ho lasa OEM faharoa raha mitombo ny fangatahana. Ho fanomanana ny famokarana, Wistron dia nanitatra ny fahafaha-mamokatra smartphone any Kunshan, atsinanan'i Sina ary India.
Apple dia nanandrana nampitombo ny fisiany tany India nandritra ny taona lasa, miaraka amin'ny mason-tsivana manamboatra ny vokariny eo an-toerana, ary miaraka amin'izay koa fananganana ivon-toeram-pizarana vaovao any India hanamafisana ny lojika sy ny rojom-pifandraisana.
Nangataka tombony amin'ny hetra avy amin'ny governemanta Indiana ny orinasa mba hahafahan'izy ireo mampihodina ny fotodrafitrasa ao aminy, saingy nandà izany tombony izany tamin'ny fiandohan'ity volana ity. Na izany aza dia nilaza izany ny minisitry ny IT Ravi Shankar Prasad India dia hanana 'saina malalaka' amin'ny fangatahana fandrisihana ho an'ny Apple ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple dia misafidy Wistron monina any India ho mpamatsy ho an'ny iPhone 8
Ny mpampiasa sasany dia mitaraina noho ny tsy fahombiazan'ny antso amin'ny AirPods
Apple dia namoaka ny iOS 10.2.1, tvOS 10.1.1 ary watchOS 3.1.3 ho an'ny mpampiasa rehetra